Iigwele eziwusizo Lawa "maqebelengwane" e-oatmeal abe yinto efunyenweyo. Ngenye intsasa, ngaphambi kokuba ndigqibe ukutya kwipreji yam, ndishiye efrijini. Kwaye ngokuhlwa, ndibuyele ekhaya, ndafumanisa into edibeneyo, endiye ndagqiba ukupheka kwakhona kwaye ndishiya "ukuma", kuphela nje! Esi sidlo siya kukukholisa abantu abalandela ukutya kwabo baze bakhonze njengesidlo sasekuseni okanye i-snack phakathi kwezidlo eziphambili. I-Fiber, equkethwe kwi-oat flakes, iya kuphucula imeko yesikhumba kunye neenwele, iya kuba nefuthe elihle kwinkqubo yesifo. Ngoko ke, kuncedo kuwo wonke umntu ukusebenzisa loo mveliso ebalulekileyo njenge-oatmeal. Ukongezelela, ngale ndlela kulula ukuyondla umntwana nge-oatmeal, ukuyikhonza njengekhekhe, ukuhlobisa ngeentlobo ezahlukeneyo, amajikijolo okanye izithelo ezomileyo. Zigcwele kwaye uphilile!
Amanzi 500 ml
Inyathelo 1 Ukulungiselela i-dessert yokutya, thabatha i-oat flakes, amanzi, ubusi kunye namantongomane.
Inyathelo 2 Phalaza i-oatmeal ngamanzi uze ufake isitofu.
Inyathelo lesi-3 Yizisa kwi-thumba, kwaye unciphise ubushushu ubuncinci kwaye upheke phantsi kwesiqhekeza kude kube yilungele (ngaphambi kokuba unyuse umbane). Oku kuya kuthatha imizuzu engama-10. Yongeza inyosi ukutya (ndisebenzisa isipuni 1 nge-slide) kwaye udibanise kakuhle.
Isinyathelo 4 Beka iphariji eligqityiweyo ekubunjeni kwaye uyigxinxe (i-moldy silicone kunye nobubanzi obuyi-17 cm kunye nobude buka 3.5 cm).
Inyathelo 5 Hlanyiswa ngamantongwane kwaye uhlambulule kubanda kubuncinane iiyure ezingama-2, ukwenzela ukuba ubunzima bubanjwe kakuhle.
Inyathelo 6 Fumana ikhekhe eliqingqiweyo ekhunjini kwaye uyinqumle ibe ngamacube okanye i-triangles, njengekhekhe.
Kissel kusuka hawthorn
"Iinqebengwane" ezenziwe kwii-cornflakes
Hvorost "Ukuze ufune itiye"
Iigcakes zepancakes ezivela e-semolina
Gcoba kwi-basmati kunye nemifuno
AmaGenesis kunye nama-chromosomes adluliselwa kumntwana
IHoroscope yeDruids, imithi
Ubomi nomsebenzi kaBernard Shaw
Ukubhiyozela umkhosi wokuqala womtshato
Ukutya umntwana ukususela ngonyaka
Ubisi lobusi nge-onion-honey sauce
Jam kwi-strawberries yasegadi neyehlathi ebusika - zokupheka kunye nesiteyathelo isinyathelo ngesinyathelo
Ukutya okulula okulula kubafazi
Iipile kwivenkile ye-microwave
Kissel kusuka kwi-currant emnyama